အစိုင်အခဲ Explorer ကို - ဖိုင် Manager ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အစိုင်အခဲ Explorer ကို - ဖိုင် Manager ကို
အစိုင်အခဲ Explorer ကို - ဖိုင် Manager က APK ကို
ဒီအစိုင်အခဲ Explorer ကိုဖိုင်မှတ်တမ်းနှင့် Cloud Manager ကဖြစ်ပါတယ်
ဒီ 14 နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ
သင် Solid Explorer ကို Unlocker ကိုပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်သင်သည်အခမဲ့အဘို့ပရီမီယံဗားရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်!
ယခုတွင်သင်သည်စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်သင်၏ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ device ကိုတစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာရှိပြီး အကယ်. သင်ကစကားဝှက်ကိုပေးမယ့်စရာမလိုဘဲ encrypt လုပ်ထားဖိုင်တွေဖွင့်ဖို့ကသုံးနိုင်သည်။ အလားတူယခုအဖြစ်ကောင်းစွာလက်ဗွေနှင့်အတူဝင်ရောက်နိုင်သည့် cloud storage များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
Google+ မှာ: https://plus.google.com/communities/113821567265426173430
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/pages/NeatBytes/1516789311908389
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများ Share: https://neatbytes.uservoice.com
- ဖိုင်ကို browser များအဖြစ်အမှုဆောင်နှစ်ဦးလွတ်လပ်သောပြား
- Rich စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ: icon တွေကိုအစုံ, အရောင်အစီအစဉ်များ, themes များ
- FTP, SFTP, WebDav, SMB / CIFS clients များ
- ပင် ZIP ဖိုင်, 7ZIP, RAR နဲ့ TAR မော်ကွန်းတိုက်ဖတ်ပါနှင့် extract လုပ်နိုင်စွမ်းစာဝှက်ထားတဲ့
- password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် ZIP ဖိုင်နဲ့ 7ZIP မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
- တိမ်တိုက်ဖိုင်မန်နေဂျာ: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive ကို, SugarSync, Copy ကူး, Mediafire တို့, Owncloud, Yandex
- Extensions: Google Play တွင်ရရှိနိုင်သီးခြား plugins ကိုပိုမို features တွေ
- အသုတ်လိုက် rename: regular expressions ကိုနှင့် variable တွေကိုသုံးပြီးတစ်ကြိမ်မှာဖိုင်များစွာပြောင်းလဲမှုအမည်များ
- အသုံးဝင်သော tool များကို: ပုန်းအောင်းမလိုချင်တဲ့ဖိုလ်ဒါ, FTP Server ကို (plugin ကို), စာညှပ်များ, Chromecast ကိုထောက်ခံကြောင်း, မီဒီယာကို browser
တစ်ကြော့မော့သောခေတ်မီကြည့်အများအပြား features တွေနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဖိုင်ကိုရှာဖွေသူရှာဖွေနေပါသလား ဤနေရာတွင်သင်မြင်ကောင်း!
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုသငျသညျအားအသစ်သောဖိုင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏ရာနှစ်ခုလွတ်လပ်သောပြားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှာဖွေနေဖိုင်နဲ့ cloud မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကိုသင် Play Store တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအပြည့်အဝပေးထားသောဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြန်ဆန်အစိုင်အခဲဟာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခါ, ပိုကောင်းပါတယ်။ အပြင်နီးပါးတိုင်းတည်နေရာအတွက် file တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကနေ, ကသင်တို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော themes များ, အိုင်ကွန်အစုံနဲ့အရောင်အစီအစဉ်များအဖြစ်အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ, ပေးသည်။ သငျသညျလွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့အရသာကိုက်ညီဖို့ interface ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးနှင့်အတူ dual pane ထဲက file ကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်အလွန်သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးပွားစေပါသည်။
သင် Dropbox, Box, Google Drive ကို, OneDrive, Mega နှင့် Owncloud အပါအဝင် cloud storage တစ်ခုကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှုပံ့ပိုးသောကွောငျ့အစိုင်အခဲ Explorer ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောမိုဃ်းတိမ်ကိုဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖိုင်မန်နေဂျာလည်းသင်၏ Windows PC နဲ့ FTP, SFTP နဲ့ WebDav အတူလုပ်ကိုင်အများအပြားဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော ZIP ဖိုင်, RAR နဲ့ 7ZIP အဖြစ်အသုံးအများဆုံး archive ကိုကို formats ဖန်တီးသို့မဟုတ် extract လုပ်နိုင်စွမ်းတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရုပ်ဆိုးကြည့်အမြစ်ရှာဖွေသူ app များကိုငြီးငွေ့နေ? ဤဖိုင်မန်နေဂျာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစနစ်အားအဆင့်ကိုဖိုင်ကိုဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနဲ့အမြစ်ရှာဖွေသူပါရှိပါတယ်။ သင်ဖတ် / Write အဖြစ်ဖိုင်စနစ်များ mounting အကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အစိုင်အခဲ Explorer ကိုအလိုအလျှောက်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုပါလိမ့်မယ်။
အစိုင်အခဲ Explorer ကိုလည်းသင့်မီဒီယာကြည့်ရှုဘို့ကြီးစွာသောဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန် access များအတွက်တစ်နေရာတည်း၌သင်တို့၏ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ သူကတောင်သင့်ရဲ့ PC မှာ Dropbox, OneDrive သို့မဟုတ် Google Drive ကိုအပေါ်ဥပမာသိမ်းဆည်းထားဝေးလံခေါင်သီသောအကြောင်းအရာများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဂီတကစားသမားများနှင့်ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူက built-in တစ်ခုရှိပါတယ်။ အများဆုံးအေးမြသောအရာအကြောင်းအရာသင့် Chromecast casted နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
- အတည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ WebDav bug တွေ
- Bzip2 မော်ကွန်းတိုက်၏ပုံသေဖွင့်လှစ်
- စနစ်တကျပြသ PNG file တွေကို resolution ကို
- အတည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ thumbnail ကိုတင်ကိစ္စများ
- က hidden files တွေကို folder ကိုဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တော့ဘူးမပြဘူး
- updated ဘာသာ
9.77 ကို MB
ဇန်နဝါရီ 7, 2017